Rifletti, oggi, sulla possibilità o meno di vedere il cuore di Gesù vivo nel tuo cuore | Io amo Gesù
Na-atụgharị uche taa mara ma ị nwere ike ịhụ obi Jizọs na ndụ gị
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 28, 2020
“Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, megheere ayi uzọ! Mana ọ zara, sị: 'N'ezie a sị m gị, amaghị m gị'. Matiu 25: 11b-12
Ọ ga-abụ ahụmahụ na-emenye ụjọ ma na-akpali iche echiche. Akụkụ a si n’ilu ​​ilu nke ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke. Ise n’ime ha dị njikere izute Onyenwe anyị ma ise ise adịghị. Mgbe Onye-nwe bịara, ụmụ agbọghọ ise nzuzu na-achọ inweta mmanụ maka oriọna ha, ma ha laghachị, emechiela mmemme mmemme ahụ. Ihe a dị n’elu na-ekpughe ihe ọzọ mere.
Jesus ọnọ uwụtn̄kpọ emi man edemede nnyịn. Anyị kwesịrị ịdị njikere maka Ya kwa ụbọchị. Ma olee otu anyị ga-esi hụ na anyị dị njikere? Anyị dị njikere mgbe anyị nwere “mmanụ” n’ụba maka oriọna anyị. Mmanụ na-anọchitekarị ọrụ ebere na ndụ anyị. Yabụ, ajụjụ dị mfe ịtụgharị uche bụ nke a: "Enwere m ọrụ ebere na ndụ m?"
Ọrụ ebere karịrị nnọọ ịhụnanya mmadụ. Site na “ihunanya mmadu” anyi putara ihe nkiti, mmetuta, ihe mmadu, dgz. Anyị nwere ike na-eche ụdị echiche a n’ebe mmadụ ọzọ nọ, n’ebe ụfọdụ ọrụ dị ma ọ bụ n’ebe ọtụtụ ihe dị na ndụ. Anyị nwere ike "ịhụ" egwuregwu n'anya, ikiri ihe nkiri, wdg.
Ma ọrụ ebere dị ọtụtụ karịa. Afọ Ọma pụtara na anyị ji obi Kraịst hụ anyị n’anya. Ọ pụtara na Jizọs etinyewo obi ebere ya n'ime obi anyị na anyị hụrụ n'anya n'ịhụnanya ya. Ebere bụ onyinye Chineke nyere anyị nke na-enyere anyị aka ịgbasa ma lekọta ndị ọzọ n'ụzọ karịrị ike anyị. Charity bụ omume Chukwu na ndụ anyị ma ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnabata na oriri nke Eluigwe.
Na -echegharị taa gbasara ma ị ga - ahụ obi Jizọs ka ọ dị ndụ n’ime obi gị. You nwere ike ịhụ ya ka ọ na-arụ ọrụ n'ime gị, na-amanye onwe gị ịbịakwute ndị ọzọ ọbụlagodi na ọ siri ike? Na-ekwu ma na-eme ihe ndị na-enyere ndị mmadụ aka ito eto n'ịdị nsọ nke ndụ? Chineke ọ na-eme ihe site na gị iji mee mgbanwe n'ụwa? Ọ bụrụ na azịza ya bụ "Ee" maka ajụjụ ndị a, mgbe ahụ ọrụ ebere na-adị ndụ gị.
Onyenweanyị, mee ka obi m bụrụ ebe obibi dabara adaba maka obi Chukwu gị. Mee ka obi m jiri ịhụnanya gị kụọ ka okwu m na omume m keta oke nlekọta gị maka ndị ọzọ. Jesus ekwere m na gị.